Nei Tichifanira Kurumbidza Jehovha Mwari?—Pisarema 147:1 | Yokudzidza
‘Rumbidzai Jah . . . Zvinofadza uye zvakakodzera kumurumbidza.’​—Pis. 147:1.
NZIYO: 59, 3
PISAREMA RECHI147 RINOKUBATSIRA SEI . . .
kuona kuti Jehovha ane hanya newe?
kuti uve nechivimbo chekuti Mwari achakununura?
kuona kuti Jehovha anotsigira sei vanhu vake achishandisa Shoko rake?
1-3. (a) Pisarema rechi147 rinofanira kunge rakanyorwa riini? (b) Tingadzidzei muPisarema rechi147?
KANA munhu akaita zvakanaka basa raanenge apiwa kana kuti akaratidza unhu hwakanaka hwechiKristu, anokodzera kurumbidzwa. Kana vanhu vachikodzera kurumbidzwa, tine chikonzero chikuru chekurumbidza Jehovha Mwari. Tinogona kumurumbidza nemhaka yekuti ane simba guru sezvatinoona pazvinhu zvinoshamisa zvaakasika, kana kuti nemhaka yekuda kwaanoita vanhu sezvinoratidzwa nekupa kwaakaita Mwanakomana wake kuti ave rudzikinuro.
2 Patinoverenga Pisarema rechi147 tinoona kuti munyori waro aiva nechido chakasimba chekurumbidza Jehovha. Akakurudzirawo vamwe kuti vabatane naye pakurumbidza Mwari.​—Verenga Pisarema 147:1, 7, 12.
3 Hatizivi kuti ndiani akanyora pisarema iri, asi kunenge kuti munyori wacho akararama panguva yakasunungurwa vaIsraeri naJehovha kubva muutapwa hweBhabhironi ndokudzokera kuJerusarema. (Pis. 147:2) Munyori wepisarema akarumbidza Jehovha nekuti vanhu vaMwari vakanga vava kukwanisazve kunamata vari munyika yavo. Asi akataurawo zvimwe zvikonzero zvekurumbidza Mwari. Ndezvipi izvozvo? Une zvikonzero zvipi zvekushevedzera uchiti “Rumbidzai Jah” muupenyu hwako?​—Pis. 147:1.
JEHOVHA ANORAPA VAKAORA MWOYO
4. VaIsraeri vaiva muutapwa vanofanira kunge vakanzwa sei pavakasunungurwa naMambo Koreshi, uye nei vangangodaro vakanzwa saizvozvo?
4 Fungidzira kuti vaIsraeri vainge vatapwa vainzwa sei vari muBhabhironi. Vanhu vakavatapa vaivatsvinyira vachiti: “Tiimbirei imwe yenziyo dzokuZiyoni.” Panguva iyoyo Jerusarema, iro raiva chikonzero chikuru chekuti vafare, rakanga raparadzwa. (Pis. 137:1-3, 6) VaJudha vaisanzwa kuda kuimba. Vainge vakaora mwoyo uye vaida kunyaradzwa. Zvisinei, sezvakanga zvaprofitwa muShoko raMwari, vakanunurwa naKoreshi, mambo wePezhiya. Akakunda Bhabhironi uye akati: “Jehovha . . . akandirayira kuti ndimuvakire imba muJerusarema . . . Munhu wose ari pakati penyu wevanhu vake vose, Jehovha Mwari wake ngaave naye. Naizvozvo iye ngaaende.” (2 Mak. 36:23) Izvi zvinofanira kunge zvakanyaradza chaizvo vaIsraeri vaigara muBhabhironi.
5. Munyori wepisarema akatii nezvesimba raJehovha rekuporesa?
5 Jehovha akanyaradza rudzi rwevaIsraeri uyewo akanyaradza mumwe nemumwe wavo. Ndizvo zvaanoitawo mazuva ano. Munyori wepisarema akataura nezvaMwari achiti: “Anoporesa vakaora mwoyo, uye anosunga panovarwadza.” (Pis. 147:3) Jehovha ane hanya nevaya vane matambudziko, angava ekurwara kana kushungurudzika. Mazuva ano, Jehovha anoda kutinyaradza uye kuporesa mwoyo yedu. (Pis. 34:18; Isa. 57:15) Anotipa uchenjeri uye simba kuti tikwanise kutsungirira chero matambudziko atingasangana nawo.​—Jak. 1:5.
6. Tingabatsirwa sei nemashoko emunyori wepisarema ari pana Pisarema 147:4? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
6 Munyori wepisarema anobva atanga kutaura nezvematenga, achitiudza kuti Jehovha “anoverenga nyeredzi kuti ingani” uye kuti “anodzishevedza dzose nemazita adzo.” (Pis. 147:4) Nei achiita seachinja nyaya uye anotaurirei nezvezvinhu zviri kudenga? Imbofunga izvi: Munyori wepisarema aigona kuona nyeredzi nemaziso ake, asi akanga asingazivi kuti ingani. Iye zvino tava kukwanisa kuona nyeredzi dzakawanda chaizvo. Vamwe vanofunga kuti muboka renyeredzi rinonzi Milky Way mune mabhiriyoni enyeredzi. Uye kunogona kunge kuine zviuru zvemabhiriyoni emapoka enyeredzi! Kwatiri, nyeredzi hadziverengeki. Asi Musiki anodzipa dzese mazita. Izvi zvinoreva kuti Jehovha anoziva nyeredzi imwe neimwe. (1 VaK. 15:41) Ko zvakadini nevanhu vake vari panyika? Mwari, uyo anoziva panenge paine nyeredzi imwe neimwe chero panguva ipi zvayo, anokuzivawo iwe pachako. Anonyatsoziva paunenge uri, manzwiro ako uye kuti chii chaunoda chero panguva ipi zvayo.
7, 8. (a) Jehovha anofunga nezvei paanoponesa vanhu vake mumatambudziko avo? (b) Taura muenzaniso unoratidza tsitsi dzaJehovha pakubatsira vanhu vane chivi.
7 Jehovha ane hanya newe uyewo ane simba netsitsi zvinodiwa kuti akubatsire kutsungirira matambudziko eupenyu. (Verenga Pisarema 147:5.) Ungaona sekuti upenyu hwakakuomera chaizvo uye kuti mutoro wacho hautakuriki. Mwari anonzwisisa zvausingakwanisi, ‘achiyeuka kuti uri guruva.’ (Pis. 103:14) Sezvo tiine chivi, tinogara tichidzokorora zvatakambokanganisa. Tinodemba chaizvo patinopotsa kutaura, patinoshuva kuita zvinhu zvakaipa, kana patinochiva zvinhu zvine vamwe. Jehovha haakanganisi, asi anonyatsonzwisisa zvatiri.​—Isa. 40:28.
8 Unogona kunge wakamboona kuti ruoko rwaJehovha rune simba rwakakubatsira sei kuti ukurire rimwe dambudziko. (Isa. 41:10, 13) Semuenzaniso, imwe hanzvadzi inopayona inonzi Kyoko, yakaora mwoyo pashure pekunge yatamira kune imwe ndima. Jehovha akaratidza sei kuti ainzwisisa matambudziko aKyoko? Mundima iyoyo, Kyoko akawana vanhu vaigona kunzwisisa manzwiro ake. Akaona sekuti Jehovha ainge achimuudza kuti: “Ndinokuda, kwete nemhaka yekuti uri piyona, asi nekuti uri mwanasikana wangu uye kuti wakazvitsaurira kwandiri. Ndinoda kuti unakidzwe neupenyu semumwe weZvapupu zvangu!” Muupenyu hwako, Wemasimbaose akaratidza sei kuti “kunzwisisa kwake hakurondedzereki”?
JEHOVHA ANOTIPA ZVINOKOSHA PAKURARAMA
9, 10. Ndeipi nzira inonyanya kukosha yatinobatsirwa nayo naJehovha? Taura muenzaniso.
9 Dzimwe nguva unogona kunge uchida zvekurarama nazvo. Semuenzaniso, unganetseka kuti hauzowani zvekudya zvakakwana. Zvisinei, Jehovha akasika nyika ichikwanisa kubereka zvekudya zvinokwana zvisikwa zvese, kunyange zvemanyana emakunguo ayo anoshevedzera kuti azviwane. (Verenga Pisarema 147:8, 9.) Kana achiramba achipa makunguo zvekudya, unogona kuva nechivimbo chekuti Jehovha achakupawo zvaunoda pakurarama.​—Pis. 37:25.
10 Zvinotonyanya kukosha ndezvekuti Jehovha anopa vanhu vake zvavanoda pakunamata, zvichiita kuti tive “nerugare rwaMwari runopfuura kufunga kwose.” (VaF. 4:6, 7) Semuenzaniso, Mutsuo nemudzimai wake vakaona kushanda kwesimba raJehovha muupenyu hwavo pakaitika tsunami muJapan muna 2011. Vakapona nekukwira pamusoro peimba yavo. Zvisinei, musi iwoyo zvinhu zvavo zvese zvakaparara vakasara nezvishomanana. Vakaita usiku hwese vachitonhorwa vari murima mune rimwe kamuri munhurikidzwa yeimba yavo. Kwayedza, vakatanga kutsvaga zvinhu zvaizovasimbisa pakutenda. Bhuku ravakangowana raiva Bhuku Regore reZvapupu zvaJehovha ra2006. Pasina nguva, Mutsuo akaona nyaya yaiva nemusoro unoti: “Tsunami Dzakauraya Vanhu Vakawanda Zvikuru.” Yaitaura nezvekudengenyeka kwenyika kwakaitika muSumatra muna 2004 kukakonzera tsunami dzisati dzamboitika. Mutsuo nemudzimai wake vaisvimha misodzi pavaiverenga nyaya yacho. Vakaona kuti Mwari anonyatsovada nekuti akasimbisa kutenda kwavo panguva chaiyo yavaida kusimbiswa. Jehovha akavapawo zvekurarama nazvo achishandisa vavanonamata navo. Asi chakanyanya kuvasimbisa kushanyirwa kwaiitwa ungano nevamiririri vesangano raMwari. Mutsuo anoti: “Ndakaona kuti Jehovha aiva pedyo nemumwe nemumwe wedu uye aitichengeta. Izvi zvainyaradza chaizvo!” Nzira inonyanya kukosha yatinobatsirwa nayo naMwari ndeyekutipa zvatinoda pakunamata, asi anotipawo zvekurarama nazvo.
BATSIRWA NESIMBA RAMWARI
11. Vaya vanoda kubatsirwa naMwari vanofanira kuitei?
11 Jehovha anogara akagadzirira ‘kubatsira vanyoro.’ (Pis. 147:6a) Asi tingaitei kuti atibatsire? Tinofanira kuva neushamwari hwepedyo naye. Kuti tive neushamwari hwepedyo naye, tinofanira kuva vanyoro. (Zef. 2:3) Vanyoro vanomirira kuti Mwari agadzirise zvinhu zvinenge zvisina kururama uye kuti abvise kutambura kwavo. Jehovha anofarira vanhu vakadaro.
12, 13. (a) Kuti tibatsirwe naMwari tinofanira kudzivisei? (b) Jehovha anofarira vanhu vakaita sei?
12 Asi Mwari “anowisira vakaipa pasi.” (Pis. 147:6b) Aya mashoko anotyisa. Kuti tibatsirwe nerudo rwakavimbika rwaMwari uye kuti asatitsamwira, tinofanira kuvenga zvaanovenga. (Pis. 97:10) Semuenzaniso, tinofanira kuvenga unzenza hwepabonde. Izvi zvinoreva kuti tinofanira kudzivisa zvinhu zvese zvingaita kuti tipedzisire taita unzenza hwepabonde, kusanganisira kuona zvinonyadzisira. (Pis. 119:37; Mat. 5:28) Izvi zvingada kuti tirwise zvakaoma, asi tinenge tichishandira zviripo nekuti tichakomborerwa naJehovha.
13 Patinenge tichirwa hondo iyi, hatifaniri kuzvivimba, asi tinofanira kuvimba naJehovha. Angafara here kana tikaedza kuzviponesa ‘nesimba rebhiza,’ kureva kunotsvagwa rubatsiro nevanhu? Aiwa! Uyewo hatifaniri kuvimba “nekumhanya kwemakumbo omunhu,” tichiita sekuti isu kana kuti mumwe munhu anogona kuunza ruponeso. (Pis. 147:10) Pane kudaro, tinofanira kunyengetera kuna Jehovha tichikumbira kuti atibatsire. Kusiyana nevanhu vanopa mazano, haamboneti nekunzwa zvikumbiro zvedu, kunyange tikakumbira takumbirazve. “Jehovha anofarira vaya vanomutya, vaya vanomirira [rudo rwake rwakavimbika].” (Pis. 147:11) Tinogona kuva nechivimbo chekuti acharamba ainesu uye achatibatsira kukunda zvido zvakaipa nekuti ane rudo rwakavimbika.
14. Munyori wepisarema aiva nechivimbo chei?
14 Jehovha anotipa chikonzero chekuti tive nechivimbo chekuti achabatsira vanhu vake pavanenge vachitambura. Achifunga nezvekuvakwazve kweJerusarema, munyori wepisarema akaimba nezvaJehovha achiti: ‘Anosimbisa mizariro yemagedhi ako; anokomborera vanakomana vako vari mukati mako. Anoisa rugare munharaunda yako.’ (Pis. 147:13, 14) Kuziva kuti Mwari aizosimbisa magedhi eguta racho kwakaita kuti munyori wepisarema anzwe akachengeteka. Kwakamupa chivimbo chekuti Jehovha aizodzivirira vanhu vake.
Shoko raMwari ringabatsira sei patinonzwa setava kukurirwa nemiedzo? (Ona ndima 15-17)
15-17. (a) Dzimwe nguva tinganzwa sei nezvematambudziko edu, asi Jehovha anoshandisa sei Shoko rake kuti atibatsire? (b) Taura muenzaniso unoratidza kuti shoko raMwari ‘rinomhanya sei kwazvo’ kuti ritibatsire.
15 Ungasangana nematambudziko anoita kuti uzvidye mwoyo. Jehovha anogona kukupa uchenjeri hwekuti uzive zvekuita. Munyori wepisarema akataura nezvaMwari wake achiti, “anotuma zvaanotaura panyika; shoko rake rinomhanya kwazvo.” Akatiwo Jehovha ‘anopa chando, anoparadzira mazaya echando, uye anokanda chimvuramabwe,’ ndokuzobvunza kuti: “Ndiani angamira kana chando chake chauya?” Anowedzera kuti Jehovha “anotuma shoko rake ozvinyungudutsa.” (Pis. 147:15-18) Mwari wedu wemasimbaose, ane uchenjeri hwese, iye anodzora chimvuramabwe nemazaya echando anogona kukubatsira kukurira chero dambudziko ripi raungasangana naro.
16 Mazuva ano, Jehovha anotitungamirira achishandisa Shoko rake, Bhaibheri. Uye “shoko rake rinomhanya kwazvo” pakuti anokurumidza kutipa mirayiridzo patinenge tichiida. Funga kuti unobatsirwa sei nekuverenga Bhaibheri, kudzidza mabhuku “emuranda akatendeka, akangwara,” kuona JW Broadcasting, kuenda pajw.org, kutaura nevakuru uye kuwadzana nevamwe vaKristu. (Mat. 24:45) Hauoni here kuti Jehovha anokurumidza kukupa mirayiridzo?
17 Simone akaona kuti Shoko raMwari rine simba. Aizvitarisira pasi zvekuti akasvika pakufunga kuti Mwari aisamufarira. Zvisinei, paaiora mwoyo, airamba achinyengetera, achikumbira kuti Jehovha amubatsire. Aigarawo achidzidza Bhaibheri. Anoti, “Handisati ndambosvika pekuti ndinotadza kuona kuti Jehovha ari kundisimbisa uye ari kunditungamirira.” Izvi zviri kumubatsira kuti aedze kuramba aine maonero akanaka.
18. Nei uchinzwa kuti wakakomborerwa naMwari, uye une zvikonzero zvipi zvekushevedzera kuti “Rumbidzai Jah”?
18 Munyori wepisarema aiziva kuti vaIsraeri vainge vakakomborerwa chaizvo. Ndivo vega vainge vakapiwa “shoko” raMwari “nemirau yake nezvaakatonga.” (Verenga Pisarema 147:19, 20.) Mazuva ano, takakomborerwa nekuti tisu tega tinodanwa nezita raMwari. Kuziva Jehovha uye kushandisa shoko rake muupenyu hwedu kuri kuita kuti tive neushamwari hwepedyo naye. Kufanana nemunyori wePisarema rechi147, hauna here zvikonzero zvakawanda zvekushevedzera kuti “Rumbidzai Jah” uye kukurudzira vamwe kuti vamurumbidzewo?